Capitaine de Vaisseau, GA Jacquy Honoré: « Ilaina ny fanamafisana ny fampiofanana eto an-toerana” - ewa.mg
News - Capitaine de Vaisseau, GA Jacquy Honoré: « Ilaina ny fanamafisana ny fampiofanana eto an-toerana”
“Tafiditra ao anatin’ny
torolalana fanovan-drafitra avy amin’ny minisiteran’ny
Fiarovam-pirenena sy ny Etamazaoron’ny Tafika ny fisian’ny
ivontoeram-piofanana an-dranomasina izay fomba iray ahafahana
manatsara ny fahaiza-manao sy traikefa ananan’ny tantsambo
miaramila hahatonga azy ireo ho matihanina tanteraka”, hoy ny
lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika an-dranomasina, ny capitaine de
vaisseau, ny GA Jacquy Honoré, nandritra ny fankalazana ny
andron’ny mpitantan-draharaha arovan’ny masindahy Martin, ny
fitantanan-draharaha eo anivon’ny Tafika malagasy, ny zoma teo tao
Mahajanga. Nohamafisin’ity manamboninahitra ity fa fotoana izao
hanamafisana ny fampiofanana vita eto an-toerana tsy hiankinana
amin’ireo sekoly avy ivelany tahaka ny teo aloha. Efa misy 11 ireo
tantsambo miaramila manaraka ny fiofanana ao ahazoana
mari-pahaizana BAT Machine “Brevet d’aptitude technique” ary
hisantarana amin’ny fomba ofisialy ity ivontoeram-piofanana ity
ireo tovolahy voaantso hanohy asa miaramila ao amin’ny Tafika
an-dranomasina miisa 200, ny faran’ny volana ho avy izao. Ankoatra
ny Semipi, nahazo ny anjara fanomezana ho azy ny
ivontoeram-piofanan’ny Tafika an-dranomasina ka ny lehiben’ny
“direction central du commissariat des armées”, ny amiraly Assany
Bemarivo Jeannot, ny nanolotra izany amin’ny tompon’andraikitry ny
ivontoerana, ny lieutenant de vaisseau, i Anahy Zafinirandra Edson
L’article Capitaine de Vaisseau, GA Jacquy Honoré: « Ilaina ny fanamafisana ny fampiofanana eto an-toerana” a été récupéré chez Newsmada.
Valanaretina sy fiarenana :: Manamafy ny tsirim-panantenana amin’ny faran’ny volana ny Filoha
Kihon-dalana amin’ny ady atrehin’i Madagaikara amin’ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 sy ny ho avy fohy ezaky ny fanarenana aratoekarena ny telo herinandro manaraka amin’ity volana aogositra ity. Nohamafisin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tany Fianarantsoa, omaly, fa andrasana hatramin’ny faran’ny volana izao ny fidinan’ny tarehimarika momba an’ireo olona vaovao voan’ny Covid-19 eto amintsika. « Aorian’izany no hiompanantsika amin’ny lafiny toekarena », hoy izy. Toy ny efa manome ny ho votoatin’ny ny fanapahan-kevitra horaisin’ ny fanjakana manaraka, izany tenin’ny Filoha izany. Manafatrafatra fatratra amin’ny rehetra mba hiaro tena sy hitandrina mafy ho fifehezana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 foana anefa izy ary indrindra ny fanamafisana ny fiarovana amin’ny alalan’ny tambavy Covid-Organics na CVO. « Zava-dehibe ny fisotroana ny tambavy CVO hisorohana ny mety ho fitomboan’ireo tranga misy fahasarotana amin’ireo marary mety hitondra ny tsimok’aretina. Tsy maintsy miahy anareo izahay ary porofon’izany izao fitondrana fanampiana hiatrehana ny krizy ara-pahasalamana izao », hoy ihany izy. Tonga nijery ifotony ny fizaràna ny vatsy tsinjo, andiany faharoa, tany Fianarantsoa sy Toliary ny Filoha mivady, omaly, hatramin’ny hariva. Nitondra fa nampiana hoan’ireo toeram-pitsaboana fototra faharoa (CSB II) tany an-toerana ihany koa izy ireo, toy ny milina manampy ny taovam-pisefoana miisa folo sy fanafody fitsaboana ny valanaretina Covid-19 ho an’ny CSB II ao Androva, Ankifafa, Manaotsara ary Mahazengy. Fanohanan’ny Filoha Noentanina manokana ireo vahoaka miahiahy amin’ny toe-pahasalamany mba hanatona avy hatrany ny toerampitsaboana, mba hahafahana mitsabo haingana ny aretina. Omaly hariva ihany ny Filoham-pirenena mivady no nihazo an’i Toliara ka nizara fanampiana avy hatrany tao amin’ny kianja Don Bosco sy ny kianja Tsimenatse ary tao amin’ny tanànan’ireo mpanjono vezo, tao Ankilibe. Nizara takamoa maimaimpoana ho an’ireo tokantrano sahirana miisa eninjato ny fikambanana Fitia, tarihin-dRajoelina Mialy, tamin’ity fotoana ity. L’article Valanaretina sy fiarenana :: Manamafy ny tsirim-panantenana amin’ny faran’ny volana ny Filoha est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra afrikanina: hitsara ny «Can 2019» i Lionel
Manana mpitsara iray i Madagasikara, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra “Can 2019”, hotanterahina any Egypta, manomboka ny 21 jona ho avy izao. Andranantenaina Lionel no hany voatendrin’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf) hiatrika izany fihaonana an-tampony amin’ny baolina kitra aty Afrika izany.Tsy mpitsara afovoany anefa izy fa mpitsara mpanampy, mandritra ity “Can 2019” ity. Nahagaga ny rehetra ihany koa anefa ny tsy nahatafiditra an’i Andofetra, tamin’ity. Araka ny vaovao voaray, toa voasazy ny tovolahy nefa tsy afaka nanamarina izany ny tale teknika nasionaly.Mahatratra 56 ireo mpitsara voatendry hitsara ity “Can 2019” ity ka 27 ny mpitsara afovoany ary 29 kosa ny an-jorony. Anisan’ireo firenena manana mpitsara betsaka indrindra ry zareo Magrebianina, toa an’i Egypta sy i Maraoka ary i Tonizia. Tompondaka L’article Kitra afrikanina: hitsara ny «Can 2019» i Lionel a été récupéré chez Newsmada.
Les coupures intempestives d’eau dans la Capitale continuent de se faire de plus belle. D’un quartier à l’autre, les tons montent et l’impatience commence à gagner les habitants de la Ville des mille. Les récentes manifestations des habitants du quartier d’Ankatso constituent l’une des manifestations de ce ras-le-bol galopant. Pour marquer leur mécontentement, les habitants du quartier en question ont, en effet, investi la chaussée en y alignant leurs «bidons jaunes» mais également en y mettant le feu. Il en a été de même pour les habitants du quartier d’Antsahameva Est, Andraisoro. Le quartier en question aurait souffert d’une coupure d’eau depuis quelques mois déjà. Une perturbation de l’approvisionnement en eau causée par la panne du robinet public. Des manifestations publiques ont également été organisées afin d’interpeller les responsables sur la nécessité de mettre en œuvre des solutions pérennes et répondant aux besoins réels de la population. Cette dernière a d’ailleurs fait savoir que d’autres manifestations seraient prévues en cas de non résolution des problématiques d’approvisionnement en eau. Si les habitants de ces deux quartiers ont manifesté leur mécontentement, ceux des autres quartiers seraient du genre silencieux et loin d’être résignés. Recueillis par José Belalahy L’article Coupure d’eau Ras-le-bol des Tananariviens est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Coupure d’eau Ras-le-bol des Tananariviens a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Valimbabena :: Hanatanteraka tetikasa etsy Ambodivonkely i Dax sy Rado
Mpanao fanatanjahan – tena roa lahy reharehan’ny fokontany Ambodivonkely, etsy amin’ny Boriborintany faha-VI eto an-drenivohitra Andriamirado Arohasina na i Dax, izay isan’ny mpilalao nandrafitra ny ekipam – pirenena na ny Barea, sy Andriamirado Heriniaina Patrick, izay nandrombaka ny medaly volamena tamin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ i Azia, teo amin’ny taranja Tae-kwondo. Noraisin’ireo mponina sy oloben’ny fokon- tany, tetsy Ambodivonkely, izy roalahy omaly, ka nampahafantaran’izy ireo ny fanatanterahany tetikasa ho an’ity tanàna niaingan’izy ireo ity mba ho valim-babena tamin’ny fahombiazany. “Hijery ny taninketsa aho. Vonona aho ny hitarika klioba vaovao hosokafana eto amin’ny fokontany”, araka ny voalazan’i Rado. “Hanao izay vitako ho an’ireo tanora eto aho. Tetikasako manokana ny hanokatra sekolin’ny baolina kitra eto mba hisy ho mpandimby ahy ho reharehan’ny fokontany hatrany sy ho fanampiana ireo tanora”, hoy indray i Dax. Hiverina any amin’ny kliobany, ny Kaizer Chiefs (Afrika Atsimo), anio Andriamirado Arohasina na i Dax. Nafana ny fihaonan’ izy roa lahy ireo tamin’ny solontenan’ny fokontany Ambodivonkely teny amin’ny Iarivo Hotel, omaly. Sendra R. L’article Valimbabena :: Hanatanteraka tetikasa etsy Ambodivonkely i Dax sy Rado est apparu en premier sur AoRaha.
Vahoaka… mahalala misy
Fiteny ilazana ny ankizy rehefa ao anaty fahasahiranana ny hoe tsy mahalala tsy misy. Tsy misy azo atao tokoa, rehefa tsy misy inona eo an-tanana. Valala tsy an-tanana tsy atolo-jaza. Amin’ny Malagasy, heverina ho raiamandreny mandrakariva ny mpitondra. Eny, na misy mihevitra sy milaza aza fa ny vahoaka no tokony ho raiamandrenin’ny mpitondra: nifidy sy nametraka azy eo amin’ny toerany; ny mpitondra, mila mtsinjo sy mamaly babena ny raiamandreny. Mbola azo iadian-kevitra?Raha zanaka àry ny vahoaka, lazaina ho hendry rehefa tsy mikorontana na manakorontana: tsy mahalala tsy misy rehefa fahasahiranana? Na tsy afa-manoatra amin’izay ataon’ny mpitondra… Amin’izao fialana miandalana amin’ny fihibohana noho ny fahamehana ara-pahasalamana amin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 izao: mbola ady fiady ny voka-dratsy sy ny takaitra navelany, indrindra ny fiatrehana ny fiainana andavanandro na izay hohanina isan’andro ihany aza. Ady fiady…Tsy hoe tsy mahalala tsy misy ny vahoaka fa mahalala misy, araka izay nampanantenaina azy. Mby ao an-tsaina ny fizarana karazana fanampiana. Mandeha araka ny tokony ho izy? Tsy misy diso anjara, mitovy avokoa… Tsy misy tsy sahirana amin’izao? Izay ny mampitroatra ny fitarainana momba ny fizarana fanampiana, mbola mampikorontana ny sasany. Miara-dalana amin’izany ny fitakiana lavareny ataon’ny isan-tsehatra toy ny ny firaisamonina sivily sy ny mpanao politika, ohatra, ny hoe fangaraharana.Mahalala misy ny rehetra, tsy tokony ho tompon-trano mihono, sanatria. Tsy hahahenika ny rehetra ny fanampiana, tsy hahafa-po rahoviana, tsy haharitra. Mba hahalala tsy misy rehefa tonga amin’ny fetra? Ny tsy fisian’ny fangaraharana sy ny fifampitokisana no mora mampandaitra ny tsaho, ny famendrofendroana… tsy kely lalana. Mila mahalala ny tena zava-misy ny vahoaka, mahalala fa misy ny azo atao amin’izao… Sao izay natao hampitony sy handamina indray no mbola mampikorontana?Rafaly Nd. L’article Vahoaka… mahalala misy a été récupéré chez Newsmada.
Hitodika eny Ambohidahy, manomboka izao, ny mason’ny mpanara-baovao taorian’ny namoahan’ny Ceni ny voka-pifidianana vonjimaika, ny asabotsy teo. Handidy sy hanapaka farany izany ny eo anivon’ny HCC. Tsy nisy fiovana firy intsony ny voka-pifidianana farany vonjimaika. Nahazo salanisa 39, 19% ny kandidà Rajoelina raha 35, 29% kosa ny kandidà Ravalomanana. Maherin’ny 8% kosa ny an’ny kandidà Rajaonarimampianina. Niakatra hatrany amin’ny telo hetsy mahery kosa ny vato maty sy ny tsy manan-kery. Izany hoe 7% mahery. 54% ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy. Hiatrika ny fihodinana faharoa Rajoelina sy Ravalomanana Hiatrika ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana izany ny kandidà Rajoelina sy Ravalomanana raha miainga amin’io voka-pifidianana vonjimaika io. Na izany aza, nahitana tsy fahatomombanana ny birao fandatsaham-bato sasany. Teo ny tsy fisian’ny PV sy ny taratasin-datsa-bato avy any amin’ny birao fandatsaham-bato (BV) sasany. Fahataran’ny voka-pifidianana na koa fahadisoana amin’ny kajin’ny isam-bato. Niseho izany tany Betioky Atsimo, Morafenobe, Beloha Androy, Maroantsetra ary teto an-drenivohitra. Manafoana ampahany na manontolo ny voka-pifidianana ny HCC Mazava ny nambaran’ny eny Alarobia. “ Tsy afaka manitsy na manova ny voka-pifidianana izahay fa manao tatitra an-tsoratra (PV) ny fahadisoana. Tsy nandray baiko na tsindry avy amin’iza izahay fa voka-pifidianana mahaleo tena io… Noraisina ny fanakianana ho fanatsarana ny fifidianana”, hoy ny lahatenin’ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery teo am-panombohana ny fitaterana izany voka-pifidianana izany. Etsy andaniny, manana 10 andro ny eo anivon’ny HCC hamadibadihana sy hitsarana ny voka-pifidianana ary koa handinihany ny fitoriana na fitarainana. Mazava ny fahefana omen’ny lalàna ny eny Ambohidahy fa afaka manafoana ampahany na manontolo ny voka-pifidianana amin’ny BV sasany izy ireo na manitsy izany. Fanintsanana na fanilihana kandidà Eo koa ny famaliana ny fitoriana mitaky ny fanintsanana na fanilihana kandidà niatrika ny fifidianana. Mamoaka ny voka-pifidianana ofisialy avy eo ny eny Ambohidahy, aorian’io 10 andro io.Izany hoe tokony ho 29 novambra izao izany. Araka ireo rehetra ireo, any amin’ny HCC izany ny baolina, manomboka izao. Vita ny adidin’ny Ceni tamin’ny fikarakarana sy fikirakirana ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Miandry ny fihodinana faharoa indray izy ireo. Synèse R.
Minisitry ny Atitany: “Tompondraikitra amin’ny Covid-19 ny rehetra”
“Mila mitandrina isika amin’izao fotoana izao: tsy tokony hiroaroa saina, tsy tokony hihalangalana. Satria mbola eo io aretina io. Tato ho ato, somary nisy fiakarany kely… Tomponandraikitra isika rehetra fa tsy ny fanjakana irery ihany” hoy ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, filohan’ny Ivontoerana iadiana amin’ny Covid-19 (CCO) teo aloha, Razafimahefa Tianarivelo.Manao ny ho afany ny fanjakana fa tsy afa-kandeha hanaraka olona tsirairay hoe hametraka ny arovava orona, hanasa matetika tanana, hanao ny fepetra sakana rehetra ara-pahasalamana… Tomponandraikitra ny tsirairay avy. Ny mahalasa saina: indraindray, maheno hoe sanatria, misy maniry ny hahatongavan’izany andiany faharoa amin’ny fihanaky ny valanaretina izany. Loza amin’antambo izany. “Fivavahana no tokony hataontsika: “Andriamanitra ô! Arovy izahay, tsy ho tonga aty aminay izany”. Tsy ho tonga aty amintsika izany, raha miaro ny tenantsika tsirairay avy isika”, hoy izy ny amin’izay hoe fidirana amin’ny valanaretina Covid-19 andianay faharoa izay.Entaniny ny rehetra ary aoka hifampanentana fa zava-doza io aretina io. Fantatra izany fa tsy ilaina intsony ny fanaporofoana an’izany. Tsy maintsy samy manao ny fiarovana ara-pahasalamana ny rehetra: ho an’ny tsirairay avy, ho an’ny fianakaviantsika, ho an’ny mpiara-miasa, ho an’ny mpiara-monina manontolo.R.Nd. L’article Minisitry ny Atitany: “Tompondraikitra amin’ny Covid-19 ny rehetra” a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «Chan 2021»: voatazon’i Niger ady sahala i Lybia
Anisan’ny voka-dalao nanamarika ny andro faharoa, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra natokana ho an’ireo mpilalao tsy matihanina, “Chan 2021”, tanterahina any Kameronina, ny ady sahala teo amin’i Niger sy ry zareo Lybianina, ho an’ny sokajy B. Fihaonana notanterahina ny alahady lasa teo.Raha ara-taratasy, ambony ny Lybianina, saingy naneho ny fahaiza-manaony ry zareo Nizerianina. Nifandanja ny fihaonana teo amin’ny roa tonta, ary samy naneho ny fahaiza-manaony ny andaniny sy ny ankilany. Ankoatra izay, lavon’ny RD Kongo, tamin’ny isa 1 no ho 0, i Kongo.Hitohy anio ny fifanintsanana ka ny vondrona D no hiditra an-tsehatra. I Zambia hihaona amin’i Tanzania ary i Ginea hifampitana amin’i Namibia. Tompondaka L’article Kitra – «Chan 2021»: voatazon’i Niger ady sahala i Lybia a été récupéré chez Newsmada.
Nampahafantatra ny vaomiera itambarana misahana ny fikarakarana ny karatra maha matihanina ny mpanao gazety « commission paritaire chargée de la délivrance de la carte d’identité professionnelle des journalistes » fa misokatra anio 19 janoary ary hifarana ny 12 febroary amin’ny 5 ora hariva ny fametrahana ny taratasy fangatahana ny karatra maha matihanina mpanao gazety. Anisan’ny hametrahana izany koa ny eny anivon’ny vaomieram-paritra na « commission paritaire régionale ».Anisan’ny mason-tsivana ahazoana ny karatra maha matihanina ny mpanao gazety ny fananana mari-pahaizana avy amina toeram-panofanana momba ny asa amin’ny asa fanaovan-gazety eken’ny minisitera miadidy ny Fampianarana ambony na ny minisitera misahana ny Fampianarana teknika sy ny fanofanana asa.Famenoana ny antontan-taratasyNa koa afaka manamarina fa nanao tsy tapaka ny asa fanaovan-gazety nandritra ny telo taona. Ary mbola miasa amina orinasa fanaovan-gazety ara-dalàna sy nanaovana fanambarana eny amin’ny tompon’andraiki-panjakana mahefa araka ny angatahin’ny lalana, na miasa amin’ny maha mpanao gazety tsy miankina, na « journaliste independant/freelance » ho an’ny orinasa fanaovan-gazety iraisam-pirenena iray na maromaro.Afaka mandefa mailaka amin’ny cpc.cip.ojm@gmail.com raha mila fanazavana fanampiny.Synèse R. L’article Asa fanaovan-gazety: misokatra ny fangatahana ny karatra maha matihanina a été récupéré chez Newsmada.
Zaza maty tao Befelatanana: « Vokatry ny fahasemporana teo am-piterahana »
Nitondra fanazavana momba ny fahafatesan’ny zaza vao teraka tao amin’ny hopitaly ho an’ny reny sy ny zaza Befelatanana ny tale, ny profesora Rakotovao Hery, sy ny mpitsabo manokana misahana ny zaza, omaly. Nitaraina tamin’ny tambajotran-tsosialy ny fianakavian’ilay zaza fa tsy navela nitondra ny zaza nody tany an-trano taorian’ny fiterahana ary namantana faty rehefa tonga teny amin’ny hopitaly hijery azy fa nahazo antso fa tsy salama ny zanany. Nambaran’ny talen’ny hopitaly fa lehibe ilay zaza teraka ary efa niloko maitso ny ranon-doha teo am-piterahana. Voatery koa nampiasa fitaovana hisintonana ilay zaza ny mpitsabo satria sahirana ny reniny namoaka azy. Nentina avy hatrany tany amin’ny sampana mikarakara ny zaza teraka tsy salama izy vokatry ny fahitan’ny mpitsabo fa sempotra. Izay fahasemporana teo am-piterahana izay no antony nitarika ny fahafatesany satria nifanintona foana izy na teo aza ny fitsaboana natao azy rehetra, araka ny fanamarihan’ny mpitsabo.Ny mpiteraka rehefa tsy manana olana fa salama, alefa mody satria maro ny vehivavy miditra hiteraka ao amin’ny hopitaly Befelatanana ka tsy maharaka ny efitrano sy ny fandriana. Momba ny fitarainan’ny renin’ilay zaza fa natakalo ny zanany, afaka manome toky ny mpitantana ny toeram-piterahana fa tranga sorohina amin’ny dingana rehetra eo am-piterahana ka mandra-pivoakan’ny reny sy ny zaza ny hopitaly izany. Tsy vao izao no nisy olona nitaraina momba ny olana nitranga tao amin’ny toeram-piterahana Befelatanana.Vonjy A. L’article Zaza maty tao Befelatanana: « Vokatry ny fahasemporana teo am-piterahana » a été récupéré chez Newsmada.
Basikety-N1A: hifandona ny GNBC ny SEBAM
Hanomboka amin’izao faran’ny herinandro izao ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara ho an’ny sokajy N1A lehilahy sy vehivavy, taranja basikety. Efa nivoaka ny fandaharan-dalao ka fihaonana 20 avy hatrany no hotanterahina ao anatin’ny roa andro voalohany. Isan’ny lalao tena andrasan’ny maro ny fifandonana sahady eo amin’ny GNBC avy eto Analamanga, tompon’ny anaram-boninahitra farany sy ny SEBAM avy any amin’ny ligin’i Boeny, fihaonana hanomboka amin’ny 6 ora latsaka fahefany hariva, ao amin’ny efitrano lehibe ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Tombanana hiady ny lalao, ekipa samy sangany ary samy manana ny herijika handrombahana fandresena avokoa. Ankilany ny ekipan’ny zandarimaria basikety, hanao ny faraheriny, hitazona ny anaram-boninahitra eo am-pelatanany. Andaniny, tombanana fa tsy hanaiky ho resy mora foana ny solontenan’i Boeny. Tsiahivina, ny efitrano kely sy ny efitrano lehibe ao amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena no handray ny lalao rehetra, amin’ity andiany ity. Mi.Raz Toy izao ny fandaharan-dalao . Asabotsy 16 janoary : efitrano lehibe : 8ora30 – (L) Asb # Usf, 9ora45: (V) Jea # Tamifa, 11ora: Mb2all # Asa, 12ora45: Cospn2 # Crjs, 14ora30: Ankaratra # Serasera, 16ora 10mn: lanonam-panokafana, 16ora40: (L) Tmbb # Cosmos, 18ora20: Cospn # Ascut. Efitrano kely. 9ora: (L) Mb2all # Cosfa, 10ora45: 2bc # Gnbc, 12ora30: Sebam # Ascb. Alahady 16 janoary : Bcest # Serasera, Cosmos # Ascb, Cospn # Mb2all, Sbbc # Jea, Cosfa # Usf, Gnbc # Sebam, Ankaratra # Asa, Tamifa # Cospn 2, 2bc # Tmbb, Ascut # Asb. L’article Basikety-N1A: hifandona ny GNBC ny SEBAM a été récupéré chez Newsmada.
Coronavirus: CSB II valo afaka mandray marary
Misy CSB II valo eto Antananarivo Renivohitra mandray an-tanana ireo tranga tsy misy fahasarotana. Anjaran’ny dokotera miasa eo anivon’ireo CSB II ny mamaritra ny fanafody omena ireo olona tonga sy mandefa azy ireo na tsia eny amin’ny CTC-19 Village Voara Andohatapenaka. Maimaimpoana avokoa ny fitiliana sy ny fizarana fanafody ho an’ireo olona maneho soratr’aretina ka ahiahina fa voan’ny Covid-19.Nitsidika ny CTC-19 Village Voara Andohatapenaka ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny profesora Rakotovao Jean Louis, ny faran’ny herinandro teo. Misy lamina napetraka handraisana ireo manana soratr’aretina na koa ahina satria nifampikasoka tamin’ny marary.Ho an’ny eny amin’ny Village Voara Andohatapenaka, misokatra amin’ny 8 ora maraina hatramin’ny 4 ora hariva amin’izao fanombohana izao ny fandraisana ireo olona hanao fitiliana. Ireo olona mampiseho soratr’aretina ahina ho Covid-19 no raisina an-tanana eny, tonga mivantana na nalefan’ny mpitsabo avy eny amin’ny CSB II. Tolotra ara-pahasalamana marolafy ny azo eny an-toerana: fizaham-pahasalamana, fakana singa hanaovana fitiliana PCR, fizarana fanafody ary fandraisana an-tanana ireo tranga misy fahasarotana. Eny amin’ny HJRA Ampefiloha kosa no mandeha ireo mila fitiliana fa handeha hivoaka ivelan’i Madagasikara amin’ny sidina. Nomarihiny fa tsy tokony handray olona hanao fitialiana ny laboratoara LA2M eny Androhibe fa toerana handefasana ireo singam-pitiliana avy amin’ny hopitaly sy ny CTC-19 Andohatapenaka.Ireo CSB 2 valo azo antononaCSB II Isotry Central, CSB II Ambohitsoa, CSB II Ampasanimalo, CSB II Antanimena, CSB II Mahamasina, CSB II Analamahitsy, CSB II Amboniloha, CSB II Ambohimanarina.VonjyL’article Coronavirus: CSB II valo afaka mandray marary a été récupéré chez Newsmada.
Efa fantatra ny tompon’ilay volamena: tafakatra folo ireo olona nalefa eny Tsiafahy sy Antanimora
“Valo no niditra am-ponja tamin’ny voalohany, izay vehivavy ny iray ary lehilahy ny fito. omaly alina indray, nisy roa hafa nahazo famonjana ary naterina eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy.” Izay ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny Fandraharahana ny fonja, Ranaivo Andriamaroahina Tovonjanahary, teny Anosy, omaly, momba ireo olona roa hafa vao naiditra am-ponja, afakomaly alina fa voarohirohy amin’ny “Raharaha volamena 73,5 kilao”, sarona tatsy Johannesburg, Afrika Atsimo.Malagasy avokoa ny ankamaroan’ireo voafonja ireo, fa misy amin’izy ireo roa na iray mizaka ny zom-pirenena frantsay. Tsy misy fomba fitondrana azy ireo manokana amin’izany fa mitovy avokoa ny voafonja. Tsy maintsy mandalo amin’ny dingana fanaraha-maso aloha izy ireo rehefa tonga any: tsy atambatra amin’ny olona rehetra. Ny ampitson’iny ihany, hatambatra amin’ny olona rehetra.Rehefa mahazo ny didim-pamonjana aterin’ny mpitandro filaminana ny eny amin’ny fonja, raisin’ny mpandraharahan’ny fonja ireo olona mahazo izany ary ampidirina am-ponja, araka ny fanazavany.“Miandry isika”, hoy kosa ny minisitry ny Fitsarana, Andriamahefarivo Johnny Richard, ny amin’ny fampodiana ireo teratany malagasy telo sy ny volamena 73,5 kilao mbola atsy Afrika Atsimo.Mbola misy hafa hosamborinaNambaran’ny eo anivon’ny Pac, amin’ny alalan’ny tonia mpampanoa lalàna, Razafindrakoto Solofo Hery fa efa fantatra ny tompon’ilay volamena. ”Tsy mbola navoaka anefa ny anaran’izy io noho ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana”, hoy izy.Efa nisy olona hafa miisa enina, ankoatra ny tompon’ilay volamena koa hosamborina. Efa nisy olona valo nampidirina am-ponja ary izao niampy roa voasambotra, ahitana teratany malagasy sy Indo-pakistaney izao nalefa eny Tsiafahy, araka ny nambarany. ”Nitondra ny volamena teny Ivato izy ireo”, hoy ihany ny Pac.Notrandrahina tany amin’ny valanjavaboahary any Mahajanga kosa ireo volamena ireo.R.Nd.L’article Efa fantatra ny tompon’ilay volamena: tafakatra folo ireo olona nalefa eny Tsiafahy sy Antanimora a été récupéré chez Newsmada.